In Myanmar, Medical Education Units (MEUs) were established in Institutes of Medicine in 1970s. MEU, Institute of Medicine, Mandalay, came into being in late 1970s. One founding father among others is the then Rector, Professor Pe Thein (retired Minister of Ministry of Health and Ministry of Education) who later helped create posts of one professor and two lecturers for MEU and some office staff members with the aim of upgrading the unit toadepartment. However, the posts of professor and lecturers could not be filled because of lack of trained personnel. MEU committees were formed with part-time members and some permanent office staff led by Rector and Senior Professors and Heads.
ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၏ ၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ စာမေးပွဲများ ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ (၂၁.၁.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၈) (နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်းတက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား Rapid Diagnostic Test-Antigen Test Kit ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း။
IT Dept	15 Jan 2021
ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၏ ၂၀၂၁-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ စာမေးပွဲများ
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၏ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် Implementation Research၊ Clinical Research နှင့် Public Health Research သုတေသနအဆိုပြုလွှာ (Proposal) များ ပေးပို့လျှောက်ထားရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
IT Dept	21 Jan 2021
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ PoerPoint Presentation များတွင် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သောအချက်များထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း။
ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေး၊ နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(ခ)(၆/၂၀၁၉) (ပုံမှန်)သင်တန်းအား (၁၈.၂.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ရန်ကြေညာခြင်း။